स्याङ्जामा जिप दु”र्घटनामा ज्यान गुमाउने प्रति हार्दिक श्रदा’ न्ज्ली …….
वालिङ् नगरपालिका १४ मा भएको जिप दु”र्घटनामा ज्यान गुमाउनु हुने प्रति हार्दिक श्र्दा’न्ज्ली ब्यक्त गर्दछौ । उहाँ हरुको परिवारजन प्रति यस दुखद घडि मा आत्म बल को कामना गर्दछौ ।।
घट’नाले सिङ्गो वलिङ् नै शोकमा डुबेको छ ।। स्याङ्जामा जिप दु”र्घटना हुँदा १४ जनाको मृ”त्यु भएको छ, १२ जना घा”इते भएका छन् । वालिङ नगरपालिका-४ सिख्रेबाट तिवारी पसलतर्फ जाँदै गरेको ग २ च ३०२६ नम्बरको जिप पञ्चमूल अर्खलबासस्थित भित्री सडक खण्डमा सडकबाट ५०० मिटर तल खसेर दु”र्घटना भएको हो । दु”र्घटनामा मृ”त्यु हुनेहरु वालिङ नगरपालिका- १४ पञ्चमुल अर्खलबासका रहेका छन् ।
स्थानीय ६३ वर्षकी माया पुन, ५० वर्षकी डेम कुमारी कुँवर, ८६ की हरिकला कुँवर, ५० वर्षकी टेककला कुँवर, २५ वर्षकी जमुना कुँवर, ७० वर्षकी भीमकला कुँवर ९ वर्षका प्रविण कुँवर, ५० वर्षका कुलदीप कुँवर,दुर्घ”टनामा मृ”त्यु भएको जिल्ला प्र”हरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रवक्ता डीएसपी रवीन्द्र खनालले जानकारी दिए । मृ”त्यु हुने अन्यमा ७० वर्षकी मुवाकुमारी कुँवर, ४३ वर्षकी पोटकुमारी कुँवर, ४३ वर्षकी जानुका कुँवर, ४२ वर्षकी ज्ञान दली कुँवर, ५० वर्षकी मीना कुँवर र फूलदेवी कुँवर रहेका छन् ।
त्यस्तै चालक भुलबहादुर कुँवर पनि ग”म्भीर घा”इते भएका छन् । स्थानीय बेलमाया कुँवर, गौतमी थापा, ज्ञानमाया कुँवर, सरस्वती कुँवर, कविता कुँवर, अनिष कुँवर, कुशल कुँवर, ज्यामकली कुँवर, कौशल कुँवर, सीता कुँवर पनि ग”म्भीर घा”इते भएका छन् । उनीहरुलाई उपचारका लागि पोखराको गण्डकी मेडिकल कलेज पठाइएको डीएसपी खनालले जानकारी दिए ।
यस्तै,नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको गृहनगर झापाको दमकमा मेयरमा एमाले उम्मेदवारको अग्रता कायमै रहँदा उपमेयरमा कांग्रेस उम्मेदवार अघि बढेका छन्। हालसम्म दमकमा २१५९ मत गणना भएको छ। त्यसमा एमाले मेयरकी उम्मेदवार गीता अधिकारीले ९५९ मत पाएकी छन् !
भने महागठबन्धनबाट राप्रपा उम्मेदवार राम थापाले ८९५ मत पाएका छन्। उपमेयरमा महागठबन्धनबाट कांग्रेस उम्मेदवार रेगिना भट्टराईले ८८६ मत पाउँदा एमाले उम्मेदवार अम्बिका खनालले ८४४ मत पाएका छन्। मतगणना जारी छ।
२०७९ बैशाख ३१, शनिबार १६:४८ 1 Minute 305 Views
विजय जुलुसको गाडी दुर्घटना हुँदा २४ जना घाइते, ६ जनाको अवस्था गम्भीर
रुपन्देहीको सैनामैनामा १७ वर्षिय युवतीले गरिन आ’त्मह’त्या(हा’र्दि’क श्र’द्धा’ञ्जली )